Shacabka Buuhoodle oo siwayn u xusay 1 Luulyo (Daawo Sawiro) – Radio Daljir
Luulyo 4, 2012 4:09 g 0
Buuhoodle, July, 03 ? Magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka cayn ayaa waxaa si wayn looga xusay munaasada 1 Luulyo oo gobollo ka mid ah Soomaaliya siwayn looga xusay, iyo meelo ka mid ah adduunka oo ay dagaan dad Soomaali ah.
Dadwayne kor u dhaafaya boqollaal isuguna jira qaybaha bulshada sida waxgarad, cuqaal, mashaa,iq, haween iyo carruur ayaa isugu soo baxay garoonka kubbada cagta ee Xabado Stadium.
Wariyaasha Radio Daljir ee ku sugan Boohoodle ayaa sheegay in fagaarahaasi ay ka hadleen abwaanno, kuwaasoo suugaantooda ku cabbirayay halgankii gobonimo-doonka Soomaaliyeed iyo marxaladii dadka Soomaalidu ay isaga rideen heeryadii gumaystihii Ingiriiska ahaa.
Col. Nadaara, Taliye ku xigeenkii ciidanka booliska Puntland oo lagu aasay Garowe.